Iwe unogona ikozvino kutamba Fortnite pane yako iPhone uye iPad nekuda kweGeForce Zvino | Nhau dze iPhone
louis padilla | 21/05/2022 11:25 | IPhone mitambo, Noticias
Mushure memwedzi yakawanda kure neApple zvishandiso, Fortnite inodzokera ku iPhone uye iPad. Izvi zvinodaro nekuda kweGeForce Zvino gore remitambo sevhisi, uye vakasununguka zvachose.
Tese tinoziva iyo yakavhurika hondo hondo pakati peApple neEpic, mugadziri weFortnite. Iyo yanga isiri kare mutambo unozivikanwa pasirese, nekuda kwekuwanikwa kwayo pane imwe neimwe uye yega yega mapuratifomu, yave kunze kweApple zvishandiso kwenguva yakareba mushure mekutyora mitemo yeApp Store uye kutanga a. kurwisana mudare nekupomerana pakati pemakambani ese ari maviri. Panguva ino zvinoita sekunge kudzoka kuApple's official app store hakugoneki, asi nekuda kweiyo iri kuramba ichizivikanwa yemitambo yemitambo masevhisi, kutamba Fortnite pane yedu iPhone uye iPad zvino zvinogoneka, uye zvakare mahara zvachose.
Uye ndeyekutenda kuGeForce Zvino, Nvidia yekutepfenyura yemitambo chikuva, iyo inotiunzira inotevera-gen PC mutambo wemitambo pane chero chishandiso, chero kupi. Iyo sevhisi yakazivisa kuti Fortnite haisisiri muBeta pachikuva chayo uye ikozvino inogona kuridzwa zvizere nemunhu wese anosaina basa ravo. Uye iwe unogona zvakare kuzviita zvachose pasina muripo, kunyangwe paine zvirambidzo, senge chokwadi chekuti iwe unogona kungoita-awa imwe chete. Uye kunyangwe iyo yakanakisa chiitiko nepuratifomu inowanikwa uchishandisa control command, ingave yakananga kune iPhone kana iyo yePS4, PS5 neXbox, unogona zvakare kushandisa kubata kubata pachiratidziri.
Uye kune avo vanoda kutamba Hondo Royale vasina kushandisa mamwe masevhisi echitatu, tinokuyeuchidza izvozvo Apex Legends Mobile inowanikwa mahara. Unogona kuirodha kubva kuApp Store ye iPhone uye iPad kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Iwe unogona ikozvino kutamba Fortnite pane yako iPhone uye iPad nekuda kweGeForce Zvino
Twinkly Flex, yako yakasarudzika neon marambi uye neHomeKit
Apple inopa magirazi ayo echokwadi akawedzerwa kubhodhi revatungamiriri